Donald Trump oo isbitaal la dhigay iyo wararkii u dambeeyey xaaladiisa caafimaad | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Donald Trump oo isbitaal la dhigay iyo wararkii u dambeeyey xaaladiisa caafimaad
Donald Trump oo isbitaal la dhigay iyo wararkii u dambeeyey xaaladiisa caafimaad
Mr Trump oo qandho qabay ayaa sheegay subaxnimadii hore ee Jimcaha isaga iyo marwada koowaad Melania Trump in laga helay Covid19.
Muuqaal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Mr Trump ku yiri: “Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qof walba taageerada weyn ee aad ii fidiseen. Waxaan aadayaa cisbitaalka Walter Reed. Waxaan u maleynayaa inaan aad u fiicanahay.”
“Laakiin waxaan hubinaynaa inay wax hagaagaan. Marwada madaxweynaha aad ayay u fiican tahay. Markaa aad ayaad u mahadsan tihiin, waan idinku ku qanacsanahay, weligayna ma illaawi doono waad mahadsan tihiin.”